सातै प्रदेशको बजेट आउँदै, कुन प्रदेशमा कति ?
June 16, 2019 Internet Khabar
असार ०१, २०७६, आइतबार काठमाडौ । आज सातवटै प्रदेशले आर्थिक बर्ष २०७६र०७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रदेश सरकारले असार १ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश सरकारहरुले आज बजेट सार्बजनिक गर्न लागेका हुन् । प्रदेश नम्बर १ ले गतवर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ९३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको प्रदेश नम्बर १ ले आगामी आर्थिक बर्षका लागी करिब ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन लागेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । प्रदेश नम्बर २ ले करिब ३२ देखि ३४ अर्ब रुपैयाँ सम्मको बजेट ल्याउने गृहकार्य गरेको छ ।
चालु आर्थिक बर्षका लागी २९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश नम्बर २ ले करिब ४ अर्बको बजेट बृद्धि गर्दै बजेट ल्याउने तयारी गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर ३ ले सबैभन्दा धेरै ५० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
पहिलो वर्ष ३५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको प्रदेश नम्बर ३ ले आगामी आर्थिक बर्षका लागि करिब ५० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने गृहकार्य गरेको हो । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक बर्षका लागी करिब ६ अर्बले वृद्धि गरी ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ ले झन्डै २५ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गर्ने गरी ३५ अर्ब हाराहारीको ल्याउँदै छ । प्रदेश नम्बर ५ ले पहिलो वर्ष २८ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । यस्तै कर्णाली प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग ऋण नलिने गरी बजेट ल्याउने जनाएको छ ।
बजेटको आकार भने ३० देखि ३२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको हुने आर्थिक तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा सानो बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
गतबर्ष २५ अर्ब रुपैंयाको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले अहिले करिब ४ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार वृद्धि गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेशहरुले पहिलो बजेटमध्ये औसतमा २२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् ।
साप्ताहिक राशिफल: यस हप्ता तपाईंको दिन कस्तो रहला ? मनकामना मातालाई एक सेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईंको मनोकामना पुरा हुनेछ ।।#ॐ:
आज सोमबार, पशुपतिनाथको मन्दिरलाई लाईक गर्दै आजको राशिफल पढ्नुहोस्।
बालविवाह अन्त्य गर्ने विश्वव्यापी प्रतिबद्धता
August 14, 2018 October 16, 2018
आज मंगलबार, शास्त्रका अनुसार गर्नै नहुने यी ३ काम !
अग्निपीडित बालबालिकालाई पोशाक